Tsy mandeha ny iPhone Keyboard? Ity ny antony & Ny tena fanamboarana! - Iphone
iza no afaka manamboatra iphone simba rano
Tsy hitako izay fitbitako
inona no dikan'ny maody fiaramanidina amin'ny iPhone
iphone 6 olana an-trano 6
Tsy mandeha tsara ny klavier amin'ny iPhone-nao ary tsy azonao antoka ny antony. Manandrana manoratra hafatra na fanamarihana ianao, saingy tsy miara-miasa ny kitendry. Ao amin'ity lahatsoratra ity, aho hazavao ny antony tsy mandeha ny kitendry iPhone anao ary asehony anao ny fomba fanamboarana ny olana ho tsara !
Fa maninona no tsy mandeha ny iPhone Keyboard-ko?
Ny kitendry iPhone matetika dia mijanona tsy miasa noho ny iray amin'ireo antony telo:
Ny app izay tadiavinao hampiasa ny keyboard iPhone dia nianjera.
Misedra olana rindrambaiko mandroso kokoa ny iPhone-nao.
Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny seho an'ny iPhone na lasa tsy mamaly.
Ny dingana etsy ambany dia hanampy anao hamantatra tsara izay nahatonga ny fitendry iPhone-nao tsy hiasa intsony ary hampiseho aminao ny fomba hamahana ilay olana!
Fafao ny efijery an'ny iPhone
Mety tsy mandeha tsara ny kitendry anao raha misy zavatra miraikitra amin'ny efijery. Matetika, ity dia ho sisa tavela amin'ny sakafo - mihinana zavatra amin'ny tananao ianao, avy eo maka ny iPhone-nao. Rehefa manomboka mampiasa ny iPhone-nao ianao, ny sakafo sasany izay nohaninao dia niraikitra tamin'ny fampisehoana, namitaka ny iPhone anao hieritreritra fa mitendry ilay efijery ianao.
Indraindray, izany dia mety hahatonga ny fitendry anao ho lasa adala ary “manorata litera samirery aza.” Raiso ny lamba microfiber iray ary esory ny vodin'ilay fampirantianao iPhone izay mipoitra ny kitendry. Raha tsy manana lamba microfiber ianao dia amporisihanay ny Progo 6-pack amin'ny Amazon .
Ahoana ny fomba ahazoana ny fivarotana app
Raha tena mafy loha ny basy eo amin'ny efijery dia azonao atao ny mampiasa ranona fanadiovana efijery. Na izany aza, mila mitandrina ianao eto - basy fanadiovana efijery malaza be dia be no misy akora mety hanimba ny fisehoan'ny iPhone.
Manoro hevitra i Apple fa aza mampiasa ranon-javatra fanadiovana toy ny mpanadio varavarankely, tsiranoka aerosol, mpanadio ao an-trano, abrasive, amoniaka, solvents, na zavatra misy hidrôzenia peroxyde na acétone.
Araka ny azonao an-tsaina dia mety ho sarotra ny manara-maso ny vokatra fanadiovana ranon-javatra izay tsy misy iray amin'ireo akora ireo. Soa ihany, nanenjika iray ho anao izahay - ny Kitapo fanadiovana efijery GreatShield Touch . Ity kit ity dia miaraka amin'ny lamba microfiber ary fitaovana fanadiovana roa-roa, mba hahafahanao miampita entana telo amin'ny lisitry ny varotrao!
Akatona ny fampiharana rehetra anao
Ity misy fanontaniana lehibe tokony apetrakao amin'ny tenanao - ny keyboard iPhone ve tsy mandeha amin'ny apps-nao, sa ny iray amin'ireo apps-nao ihany no mitranga ny olana?
Raha toa ka tsy mandeha amin'ny fitendrenao ny fitendry dia tsy azo inoana fa fampiharana iray manokana no mahatonga ny olana. Raha tsy mandeha amin'ny rindrambaiko iray fotsiny ny fitendry, dia mety hisy ny fianjerana amin'ny rindrambaiko, ka izany no mahatonga ny olana.
Na inona na inona toe-javatra misy anao dia andao akatona ny fampiharana rehetra amin'ny iPhone-nao . Amin'ity fomba ity, azontsika antoka fa tsy fianjerana amin'ny fampiharana no tsy nahatonga ny fitendry iPhone-nao tsy hiasa intsony.
Mba hanakatonana ny fampiharana anao dia sokafy ny mpandefa app amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa ny bokotra Home (iPhone 8 sy ny taloha) na ny fikitika avy eo amin'ny farany ambany amin'ny efijery mankany afovoan'ny efijery (iPhone X). Avy eo, kosohy ny fampiharana anao sy ny eny an-tampon'ny fampirantiana. Ho fantatrao fa mihidy daholo ny fampiharana anao rehefa tsy misy miseho ao amin'ny mpandefa app.
Na dia nikatonanao aza ny rindranasa rehetra tamin'ny iPhone dia mety mbola tsy mandeha ny kitendry iPhone anao noho ny olan'ny rindrambaiko madinidinika. Ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone dia afaka manamboatra olan'ny lozisialy kely, satria mamela ny programa rehetra mandeha amin'ny iPhone hikatona voajanahary.
Mba hamonoana ny iPhone-nao, tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra, avy eo solooy ny sary mena solafaka hiala amin'ny herinaratra . Raha manana iPhone X ianao dia tsindrio ary tazomy ny bokotra an-daniny sy ny bokotra fidina ambany, avy eo vonoy ny iPhone anao amin'ny alàlan'ny fikosehana ny kisary herinaratra avy eo ankavia miankavanana.
maninona ny findaiko no mijanona tsy mifandray amin'ny wifi
Mba hamerenana amin'ny laoniny ny iPhone dia tsindrio ary tazomy ny bokotra sisiny (iPhone X) na ny bokotra herinaratra (iPhone 8 na taloha) mandra-pahatongan'ny sary famantarana Apple eo amin'ny efijery.
Matetika izahay dia miantso ny Reset All Settings ho toy ny 'bala majika' satria mety hitrandrahana olana rindrambaiko manahirana izay sarotra vahana izany. Io famerenana io dia mamerina amin'ny laoniny ny zava-drehetra ao amin'ny app Settings amin'ny fivadihan'ny orinasa.
Mila miditra indray ny tenimiafinao Wi-Fi ianao, manamboatra indray ny temotrao ary mampifandray indray amin'ireo fitaovana Bluetooth anao, saingy mendrika ny hamerenanao ny fitendry iPhone anao indray.
Raha hamerina ny fikirana rehetra ao amin'ny iPhone dia mankanesa any amin'ny Settings -> General -> Reset ary paompy Avereno ny fikirana rehetra . Ampidiro ny passcode iPhone-nao, avy eo tap Avereno ny fikirana rehetra manamarina.
ahoana no anahafanao sy apetaho amin'ny iphone
Raha toa ka tsy mandeha ny Reset All Settings mba hamahana ny olanao keyboard iPhone dia tonga ny fotoana apetraho amin'ny maody DFU ny iPhone-nao ary mamerina. Ity famerenana ity dia hamafa sy hampakatra ny tsipika kaody rehetra amin'ny iPhone. Rehefa vita ny famerenana amin'ny laoniny, dia ho toy ny nesorinao voalohany tao anaty boaty ny iPhone.
Alohan'ny hametrahanao ny iPhone ao anaty maody DFU, dia tena mamporisika anao mafy aho mitahiry backup amin'ny data sy fampahalalana rehetra nataonao. Amin'izany no ahafahanao mamerina amin'ny laoniny avy amin'ny backup ary tsy hahavery ny sarinao, ny horonan-tsarinao ary maro hafa.
Tsindrio ny birao lojika momba ny iPhone
Ity dingana ity dia tena fitifirana lava, saingy mendrika ny manandrana raha mahavonjy tena amin'ny dia mankany Apple Store ianao. Raha tsy miasa intsony ny kitendry iPhone anao rehefa nazeranao tamin'ny faritra sarotra, ireo tariby kely ao anatin'ny iPhone izay mampifandray ny tabilao lojika amin'ny fampisehoana dia mety ho nivadika. Raha manjary tsy mandeha izy ireo dia mety tsy hamaly ny fampisehoana.
Ny toerana misy ny tabilao lojika dia hiovaova arakaraka izay maodely iPhone anananao. Manoro hevitra anao izahay handeha iFixit ary mahita ny torolàlana latsa-dranomaso ho an'ny modely iPhone hianaranao hoe aiza no misy ny lozika lojika.
Raha vantany vao hitanao ny tabilao lojika, tsindrio mivantana eo amboniny. Mila manindry mafy ianao, nefa mitandrema sao manindry mafy loatra , satria atahoranao ny famakiana ny seho. Na izany aza, raha efa tsy mamaly ny fampirantianao dia mety tsy hisy ho very.
Raha ny DFU naverina amin'ny laoniny dia tsy nanamboatra ny kitendry iPhone anao, dia azontsika atao ny manilika ny mety hisian'ny olana amin'ny lozisialy. Ankehitriny, tonga ny fotoana hiresahana ireo safidinao fanamboarana.
Ny fahasimban'ny rano, ny efijery vaky, na ny latsaka tsy nahy dia mety hahatonga anao Fampisehoana iPhone hijanona tsy hiasa . Raha tsy mandeha ny seho dia ho sarotra aminao ny hanao na dia ny asa tsotra indrindra amin'ny iPhoneo aza, toy ny fanokafana rindrambaiko na fanoratana amin'ny fitendry.
Raha toa ka voasaron'ny AppleCare + ny iPhone dia mankanesa any amin'ny Apple Store ao an-toerana ary asao teknisianina iray hijery izany. Manoro hevitra ihany koa izahay hanin-kotrana , orinasa manamboatra amin'ny alàlan'ny fangatahana izay mandefa teknolojia voamarina mivantana aminao!
Mihazona ny lakile ianao
Ny keyboard-n'ny iPhone-nao dia mandeha indray ary afaka miverina amin'ny hafatra sy mailaka ary naoty fanandramana ianao! Amin'ny manaraka dia tsy mandeha ny kitendry iPhone anao, ho fantatrao hoe ho avy aiza ianao hamaha ny olana. Ampahafantaro ahy ny dingana nanamboatra ny iPhoneo amin'ny famelana hevitra etsy ambany!